Amathrendi Ezicathulo zeStradivarius Ongaphuthelwa | Bezzia
USusana godoy | | Izicathulo
Izitayela zezicathulo ekwindla nasebusika sezilapha. Yebo, kuliqiniso ukuthi kunzima kakhulu ngathi ukuvalelisa ngenkathi yehlobo kodwa kufanele siqale isizini entsha ngomdlandla futhi ngalokhu, akukho okufana nokuzithokozisa ngakho ukukhethwa kwezicathulo okusisondeza eStradivarius.
Ngoba zizoba umphelelisi ophelele ekubukekeni kwakho okuhle. Ngaphezu kwesitayela sayo asikwazi ukukhohlwa ukunethezeka kwayo futhi yilokho kanye ozokuthola kuwo ngamunye wale mibono. Uma ufuna ukuvikela izinyawo zakho kodwa ngokuqala, khona-ke usesandleni esihle.
1 Izicathulo zezintambo zezintambo ezine-sole sole
2 Amathrendi Ezicathulo: Amabhuzu eZip Front Ankle
3 Ungaphuthelwa isithende esibanzi emabhuzwini akho!
4 Isitayela sezinkomo sibopha enye yezitayela zezicathulo
Izicathulo zezintambo zezintambo ezine-sole sole
Eminye yemibono ezophumelela kakhulu kulo nyaka kuzoba amabhuzu enjoloba. Vele, akuyona into esisimangazayo, ngoba isibe esinye sezisekelo ezinhle isikhathi eside. Ikakhulukazi kuma-booties, kepha futhi nasemabhuthini aphezulu, kunamamodeli afana nalawa esiwasho. Kuyisitayela esingajwayelekile kepha lokho kunikeza ukubukeka okuhle njengomphumela wokugcina. Itende eliwugqinsi esingalithola kokuqedile okuhlukahlukene kule sizini, lapho izomakwa khona ngokuxoshwa okungcono.
Ukulandelana kwezintambo kungenye yemininingwane efaka isicathulo esifana nalesi. Kuzokwenza lokho kuthinta kwezempi kube khona, ngoba isikhathi esithile asikwazi ukuba ngaphandle kwayo. Indlela ebonakalayo yokuqala isizini entsha ngonyawo lwesokudla futhi akukaze kushiwo kangcono. Futhi, usuvele uyazi ukuthi lolu hlobo lwezicathulo njalo Ungayihlanganisa nezingubo zombili ze-midi namabhulukwe ama-denim noma indwangu, ngokuya ngokuthanda kwakho. Bazokuvumela ukhethe isitayela sakho futhi siyakuthanda lokho! Khumbula ukuthi ngaphezu kwemibala eyisisekelo, unamanye ama-shades wokuhlanganisa.
Amathrendi Ezicathulo: Amabhuzu eZip Front Ankle
Yize isitayela sifana kakhulu nalokhu esesikushilo, futhi futhi sinentambo enhle yenjoloba esivikela ezinsukwini ezinemvula kakhulu. Kepha ngasikhathi sinye, ngeke nje sithokozele ukuvikelwa kwekwindla noma ebusika kepha futhi nokuqala. Phakathi kwemikhuba yezicathulo sithola lo mbono ongemuhle futhi. Ingabe mayelana ezinye izicathulo zamaqakala ezineziphu, kepha kulokhu, ngaphambili. Yebo, mhlawumbe sikujwayele ukugqokwa ohlangothini noma emuva. Uyawuthanda umkhuba omusha?
Ungaphuthelwa isithende esibanzi emabhuzwini akho!
I-Los amabhuzu amaqakala ayisikweles kungenye yezinketho ezinhle esinazo kumikhuba yezicathulo zeStradivarius. Kulokhu, ukusikwa kwesikwele kukhona kokubili esithendeni nasendaweni yezwane. Isitayela esifanelekile futhi esinethezekile ngoba ngayo izinyawo zethu zizophumula kakhulu kunendlela esicabanga ngayo. Futhi singawahlanganisa nokubukeka kwemini nobusuku, ngenkathi sishintsha imibala emibili eyisisekelo engalokothi ilimaze. Ngokuvalwa kwe-zip emuva bazokunikeza sonke isitayela nenduduzo yalezo zikhathi zomsebenzi noma zokuzilibazisa ezisazofika.
Isitayela sezinkomo sibopha enye yezitayela zezicathulo
Kubo, kubo nakubo bonke abantu isitayela ongafuni ukusilahla kule sizini. Into engasimangazi ngoba njengoba sibona, ibinyathela kakhulu. Amabhuzu wesitayela seCowboy noma amabhuzu amaqakala ayisibonelo esihle sokuqala kanye nokunambitheka okuhle. Kusinika ukuthinta okungajwayelekile, kepha futhi kugcwele okwangempela. Ngakho-ke, kuwumqondo omuhle ukugqoka ngezingubo eziphrintiwe nezindwangu zoketshezi.Kanye nejean noma mhlawumbe, ngeziketi ezisikiwe eziqondile. Ngaso sonke isikhathi sikushiyela kokuzikhethela kwakho, kepha khumbula ukuthi amabhuzu alesi sitayela azotholakala ngezindwangu ezahlukahlukene futhi anemininingwane efakiwe. Umbono obalulekile wesizini!
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » imfashini » Izicathulo » Izitayela zezicathulo zeStradivarius zokuwa nobusika
Usizi olwesabekayo kulezi zithandani